Zidane oo Sheegay in Ronaldo iyo Naymar ay ka Wada Cayaari karaan Hal Koox – Gool FM
Martial oo sharraxay sababta uu No. 9-aad gaar ugu yahay, muxuuse ka yiri Rashford?
Zidane oo Sheegay in Ronaldo iyo Naymar ay ka Wada Cayaari karaan Hal Koox
CR Shariif May 12, 2018
( Spain ) 12 Maajo 2018. Zinedine Zidane ayaa shaki galin in Neymar iyo Cristiano Ronaldo laga yaabo inay ka wada cayaaran hal koox inkastoo hogaamiyaha Madrid uu diiday inuu qeexo hadii Real ay wadahadalo kula jirto xiddiga Brazil.
Neymar ayaa ka dhaqaaqay Barcelona oo ku biiray naadiga Paris Saint-Germain xagaagii hore isagoo lagula wareegay adduun dhan €222 milyan oo euro oo u dhiganta £196m oo gini dhanka dollar kana u dhiganta $266m oo dollar.
Laaciibka reer Brazil ayaa soo bandhigay dhibaato weyn oo ku aadan kooxda caasimada France ka hor inta uusan dhaawac jab ah soo gaarin bishii February, 26 jikaan ayaa si shaqsi ahaan loola xariirinayay kooxda Madrid.
Sida uu wariyay wargeysa Catalan ee Mundo Deportivo khamiistii Neymar ayaa u sheegay saaxiibadiisa kooxda inuu ka dhaqaaqayo naadiga dhamaadka kal ciyaareedkan, laakiin Zidane ayaa diiday inuu kaga hadlo shirka jaraa’id ee kulanka Celta Vigo wax ku aadan laacibka PSG.
“Waqti xaadirkaan, dhamaantiin waxaan idiin sheegi karaa inaan ka walwal sanahay waxa soo socda,” ayuu yiri macalinka France oo doonaya inuu ku guuleysto koobkii seddaxaad oo xariir ah tartanka Champions League marka ay wajahan Liverpool dhamaadka bishaan.
“Kadib finaalka ayaa ka hadli doonaa waxa kooxda kaga aadan sanadka dambe iyo waxa isbadal ah ee aan sameen doono. Laakiin kama hadli karo wax quseeya Neymar waqtigaan.”
Si kastaba, wuxuu soo qaatay laacibkii Youri Djorkaeff wayihiisii cayaareed macalinka Madrid, wuxuuna Zidane diiday wararka sheegaya in imaanshaha Neymar uu war xun u yahay dhaliyaha ugu goolasha badan kooxda ee Cristiano Ronaldo.
“Cayaartoyda wagaansan mar walbaa wey isla jaan qaandaan,” ayuu yiri Zidane. “Waxaan xasuustaa hal sano oo ay yiraahdeen mawada cayaari kartaan Djorkaeff. Waxaana si wadajira ugu guuleysanay koobka adduunka.
Sidaa daraadeed cayaartoyda wanaagsan waa ay ka wada cayaari karaan hal meel. ” Halkaasna waxaa ku jira kiimiko. ”
HORDHACA: Real Madrid vs Celta Vigo
Wenger oo sheegaya inuu sii daganaanayo London kadib marka uu ka tago Arsenal